Kukhona izinto eziningi kakhulu ongathanda ngazo-WordPress. Kulula ukuyisebenzisa, mahhala, iguquguquke futhi ixhaswe ngumphakathi omkhulu ohlale ezimisele ukusiza abaqalayo.
Nakuba ihhovisi le-WordPress elisemthethweni selinikeza kakade okuningi ama-plugin ukwakha ifomu, amanye amabhlogi nabathengisi bakhetha ukunamathela ku-G Suite – isiteji esisekelwe ngamafu se-webmasters eklanyelwe yilokho ngapha.
2 Ukuthumela ifomu lakho le-Google ku-WordPress
3 Izmantojiet benzisa i-wpGForm
Ngaphansi kokuthi "Qala ifomu elisha," khetha ukuthi ungathanda yini ukuqala kusukela ekuqaleni noma ukusebenzisa ithempulethi ekhona ngaphambili.
Yiqiniso, ukusebenzisa ithempulethi yisikhathi esikhulu-khulu, ikakhulukazi uma usuvele wazi ukuthi uzama ukufeza ngefomu lakho. Kodwa ngenxa yokubonisa izici zefomu ze-Google, ake siqhubeke futhi siqale kusukela kusifanekiso esingenalutho.
Ngokuzenzakalelayo, isihleli sefomu eliyinhloko sifaka uhlobo lombuzo "olukhetiils". Lokhu kusebenza ekwenzeni amafomu enhlolovo. Uma ufuna ukusebenzisa enye into, chofoza imenyu yokudonsela phansi ethi ‘Multiple’ ukuze uveze izinketho zakho.
Ukuze ufunde kabanzi mayelana nemisebenzi yeFomu le-Google, bheka kwi-G Suite mācību centrs ngokuchofoza lesi isixhumanisi.
Ukuthumela ifomu lakho le-Google ku-WordPress
Ukuthola ikhodi yokushumeka yefomu lakho, chofoza inkinobho ethi ‘Thumela’ ekhoneni eliphezulu kwesokudla somhleli.
Khumbula, uma unamathisele ikhodi yokushumeka usebenzisa isihleli esibonakalayo, ikhodi yakho ingavela njengoba injalo. Izmantojiet benzisa umhleli wombhalo uzotshela i-WordPress ukuthi idinga ukusebenzisa umugqa othile njengekhodi. Uma usuqedile, chofoza inkinobho ‘Ukubuka kuqala’ ukubona ukuthi ikhodi isebenza yini.
Ukubukeka kwefomu lakho kuxhomeke ezintweni ezintathu: isihloko sakho samanje se-WordPress, ubukhulu obubekwe lapho ukhiqiza ikhodi yokunamathiswa, kanye nezintandokazi zakho zekhalenda kumbala we-Google Amafomu.
Qaphela ukuthi isihloko sakho se-WordPress sichaza ububanzi bokuqukethwe kokuthunyelwe kwendawo yakho. Ungalungisa lokhu ngekhodi noma ngokufaka enye indaba. Kwezinye izingqikithi, indawo yokuqukethwe ibuye ishintshele ububanzi obugcwele uma ukhubaza amawijethi we-sidebar.
Izmantojiet benzisa i-wpGForm
Ukwengeza amafomu we-Google ngokusebenzisa amakhodi wokungena kubonakala elula ukuthi asikho isizathu sokusebenzisa ama spraudnis, akunjalo?
Uma umgomo wakho kuphela ukufaka amafomu e-Google kwisayithi lakho le-WordPress, inguyebo. Nokho, wpGForm yenza okuningi kunokuhlanganisa nje amafomu. Ibuye ikuvumele ukuthi ufihle isihloko sefomu, shintsha inkinobho yokuhambisa, sebenzisa i-captcha, njalonjalo.
Kodwa ngaphambi kwanoma yini enye, khumbula ukuthi i-wpGForm isebenza kuphela ngenguqulo endala yamafomu e-Google.
Ukufinyelela lokhu, chofoza inkinobho ‘Usizo & Impendulo ‘bese ukhetha’ Buyela Kumafomu amadala. ‘
Ngemuva kokufaka i-wpGForm, iya kudeshibhodi yakho ye-WordPress bese uqhafaza ‘Amafomu e-Google’> “Faka Ifomu le-Google elisha”.
Okulandelayo, unamathisela isixhumanisi kwifomu lakho enkombeni ye- "Fomu URL". Ungakuthola lokhu ngokuya kumhleli wamaFomu e-Google bese uchofoza u-‘Fayela ‘>’Fomu lokuthumela. ‘
Ngemuva kokunamathisela isixhumanisi, chofoza inkinobho eluhlaza okwesibhakabhaka ‘Shicilela’. Yilokho kuphela! Uma i-URL evunyelwe ifakiwe, ifomu lakho manje selilungele ukusetshenziswa nge-shortcode. Lokhu kungafinyeleleka ngokuya ku-‘Google Amafomu ‘>’Amafomu e-Google. ‘
Kodwa ngakwesokunene, amafomu we-Google ne-wpGForm yinhlanganisela enamandla engathatha imizamo yakho yokuqoqa idatha ezingeni elilandelayo. Ungakwazi ukuchaza imithetho ye-CSS, ukuqinisekiswa kokufaka kokufaka, ukunika amandla amasimu afihliwe, futhi ukwandisa umbhalo ozenzakalelayo ku-Google Form izinkinobho.
Ukuze ufunde kabanzi mayelana nezinto ongayenza nge-wpGForm, ungabheka kwisigaba samathiphu nesicingo esitholwe kumdali website esemthethweni.
Kukhona nu a reușit kakhulu ongathanda ngazo nge-WordPress. Kulula ukuyisebenzisa, mahhala, iguquguquke futhi ixhaswe